Ac Filter, Emi Filter, Electrical Filter, Ac Noise Filter - Mengsheng
14 taona traikefa amin'ny teknolojia fanapahana tamin'ny laser
Chengdu Mengsheng Electronics Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2008. Hatramin'ny nananganana azy, ny orinasa dia nanizingizina ny hampivelatra ny siansa sy ny teknolojia, mifototra amin'ny laza sy ny tsy fivadihana, ny fihazonana ny fampandrosoana maharitra tsara, nanangana rafitra fitantanana kalitao sy rafitra fitantanana.Mahafeno ny filan'ny fampandrosoana ny tsena, mamolavola drafitra ara-barotra mba hanomezana mpanjifa vokatra azo itokisana, tsy lafo ary serivisy kalitao avo lenta, ny orinasa dia manome ny orinasa EMI famatsiana herinaratra sivana sy ny serivisy fitiliana sy ny vahaolana EMC taorian'ny taona maro nisian'ny fampandrosoana.
Hatramin'ny nananganana azy, ny orinasa dia nanizingizina ny hampivelatra ny siansa sy ny teknolojia, mifototra amin'ny laza sy ny tsy fivadihana, ny fitazonana ny fampandrosoana maharitra tsara, nanangana rafitra fitantanana kalitao sy rafitra fitantanana.
Ny orinasa dia manolo-tena amin'ny fikarohana sy fampivoarana ny fampifanarahana elektromagnetika sy ny teknolojia fanafoanana harmonika.Isika dia iray amin'ireo orinasa mety indrindra any Shina.
Ny vokatra vitantsika rehetra dia 100% nojerena sy aterin'ny mpiasan'ny famokarana matihanina, mpanandrana ary fitaovana fitiliana matihanina mba hiantohana ny kalitao sy ny fahamendrehan'ny vokatra tsirairay.
Mpanamboatra OEM/ODM 3 Phas...
Sivana Ac tsara kalitao - D...
DAC1 3 Phase EMI Power Line...
DAA1 dingana tokana AC 220V E...
DBI5-S dingana tokana EMI Fil...
Sivana EMI DBI5 dingana tokana...
Sivana EMI DAI2 dingana tokana...
Sivana EMI DAI1 dingana tokana...
DBA3-1 Compact Multipurpose...
DAA2 Compact Multipurpose T...
Fomba mahazatra fanivanana tabataba amin'ny fampiasana Monolit...
Na dia malaza aza ny fomba kenda mahazatra, ny safidy hafa dia ny sivana EMI monolithic. Rehefa napetraka araka ny tokony ho izy, ireo singa seramika multilayer ireo dia manome fandavana ny feo mahazatra mahazatra.Antony maro no mampitombo ny habetsahan'ny fitsabahana "tabataba" izay mety hanimba na hanelingelina ny...
Inona avy ireo karazana sivana emi ananantsika?
Ny vokatra lehibe indrindra dia ny sivana EMI, ny sivana Power Line, ny sivana EMI Noise, ny sivana ambany, ny band-pass Fiter